စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: ကာရန်မညီ ညများဆီသို့....
ညရဲ့ကာရန်တွေက နရီစည်းချက် မကိုက်ညီလှ.. ဟိုဘက်ဒီဘက် လူးလိမ့်နေပေမဲ့ အိပ်ပျော်မယ့်အချိန်ဆီ မရောက်နိုင်သေး..
အိပ်ကိုအိပ်သင့်နေပြီလို့ ဦးနှောက်က ခိုင်းစေနေပေမဲ့ မျက်လုံးတွေက အာခံနေတုန်း. အတွေးတွေ ပြန့်ကြဲနေခဲ့ပြီး လရောင်ပင်မသာတဲ့ ညရဲ့အလယ်မှာ ကြယ်ရောင်နဲ့လည်း ဝေးနေဆဲ…
မျက်စိကို အတင်းမှိတ်ပြီး ဂဏန်းတွေကို ၁ ကနေ စရေနေမိတယ်.. ဒီအချိန်ကိုမှ အိပ်ပျော်သွားစေဖို့ မကြိုးစားနိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်အရာကိုမှ ကျမ အောင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. အိပ်ကိုအိပ်ရမယ်.. အိပ်ပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်.. ဒီလိုသေးသေးဖွဲဖွဲမှာကို ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် နိုင်အောင် မထိန်းနိုင်ခဲ့ရင် ကျမ ဘယ်လိုအရာကိုမှ ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါ..
ဥပမာ ကျမရဲ့ တယူသန်စိတ်တွေကိုရောပေါ့…
တယူသန်ဆန်လှတဲ့ မိန်းခလေးဟာ ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာတင် နေသားကျအောင် ကြိုးစားနေဆဲ.. အရွဲ့တိုက်တတ်တဲ့.. မာနကြီးတယ်လို့ အထင်ခံချင်နေတဲ့.. နားလည်ရခက်ခဲတယ်လို့ အယူဆခံချင်နေတဲ့ မိန်းခလေးဟာ တကယ်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုတောင် ကိုယ်နာကျင်အောင် မလုပ်ရက်ခဲ့…
နာကျင်မှာကို ကြောက်နေတဲ့ မိန်းခလေးက ထပ်တိုးလာမယ့် သံယောဇဉ်တွေရဲ့ သုခထက် ထပ်ပိုးလာမယ့် ဘေးထွက်ဒဏ်ရာတွေကို ကြောက်တတ်နေခဲ့ပြီ.. ဒီလိုနဲ့ပဲ သံယောဇဉ်တရားတွေရဲ့ ကမ်းလင့်နေတဲ့ လက်တွေကို တမင် လွှတ်ချခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လွတ်ကျချင်ခဲ့တာ… ဒီလိုနဲ့ပဲ လေဟာနယ်ထဲ လွင့်မျော လွတ်ထွက် လွင့် လွင့် လွင့် လွှင့်နေခဲ့…..
သံယောဇဉ်တွေရဲ့ ချည်နှောင်မှုတွေကို အခုအချိန်မှာ မလိုချင်ခဲ့တော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်လောက် ဘေးနားမှာရှိနေရုံနဲ့တင် စိတ်ကျေနပ်နေခဲ့ပြီ.. ကမ်းလင့်နေတဲ့လက်တွေရဲ့ အစုံကို မျက်စိစုံမှိတ် တစ်ဖက်ကို ကျောခိုင်းလှည့်ခဲ့ပြီ..
နောက်ကျောခိုင်းဆီက နားမလည်နိုင်မှုတွေအတွက် ဒီမှာဘက်မှာတော့ မျက်ရည်ဝဲ အံတွေခဲ.. နောက်ပြန်မလှည့်နဲ့ ဆက်သွား… လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် နားမလည်နိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံတွေနဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ကမ်းလင့်နေတဲ့ လက်တွေကို တွေ့ရင် စိတ်တွေ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တော့မယ်…
‘ခင်ဗျား စိတ်တွေကို နည်းနည်းလေး လျှော့လိုက်… တခါတလေ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖို့မလိုဘူး.. ပြုံးပြလိုက်ရင်တောင် အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲကုန်မယ်မှန်း သိနေရက်နဲ့ ခေါင်းကလဲ မာလိုက်တာ…’
အဲ့ဒီလောက် လွယ်လင့်တကူပြောင်းလဲလို့ရမယ်ဆိုရင် အခြေအနေတွေ အကုန် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့..
အရာရာ ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်တယ်လို့ အထင်အမြင်ကို ရစေချင်မိတုန်းက ပြဿနာတွေ .. အခက်အခဲတွေ .. အရှုပ်အထွေးတွေ .. ဒါတွေ ဒါတွေ အားလုံး နားလည်သူကြီးလို.. စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးသူကြီးလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ရောက်စေခဲ့တယ်.. နောက်တော့ ကိုယ်မောပန်းလာခဲ့ပြီ.. ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အားအင်တွေ စိတ်ခွန်အားတွေ .. ဒါတွေ ဒါတွေ အကုန်ပျောက်ဆုံး .. နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်မှာ ပြုံးပြစရာ ခွန်အားတောင် မကျန်ရစ်ခဲ့….
တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မာန်စွဲနေတဲ့ နားလည်မှုအလွဲတွေထဲ စိတ်မောပန်းလာခဲ့တာ များလှပါပြီ..
1း15 am, 5-8-2013
at 7:45 AM Labels: စိတ်ထွက်ပေါက်